February | 2008 | Moep1's Blog
Secretary-1 attends the signing of Chibwe Nge Hydropower project
(NAY PYI TAW, Feb 27 , 2008)
Feb-Secretary-1 of the State Peace and Development Council Lt-Gen Thiha Thura Tin Aung Myint Oo attended the ceremony to sign Chibwe Nge hydropower project contract at the SPDC Office here this afternoon.
Also present on the ocassion were Minister for Electric Power No 1 Col Zaw Min, Minister for Electric Power No2Maj-Gen Khin Maung Myint, Deputy Minister for Electric Power No 1 U Myo Myint, Director-General of SPDC Office Col Kyaw Kyaw Win, departmental officials, the Chinese delegation led by Director-General Mr Kong Ling Long of National Development and Reform Commission (NDRC) of the People’s Republic of China and Chinese Ambassador to Myanmar Mr Guan Mu.Director-General of the Hydropower Department under the Ministry of Electric Power No 1 U Aung Koe Shwe and Vice-President Mdm Zhang Xiaolu of China Power Investment Corporation (CPI) signed the agreement and exchanged the documents.
The Secretary-1, ministers, the deputy minister and departmental officials posed foradocumentary photo together with the Chinese guests.
Comments Off on Secretary-1 attends the signing of Chibwe Nge Hydropower project	| ချီဗွေငယ် (Chibwe Nge)	| Permalink
Posted by moep1
ချီဗွေငယ် ရေအားလျှပ်စစ် စီမံကိန်း ကန်ထရိုက် စာချုပ် ချုပ်ဆိုပွဲ
(နေပြည်တော် ဖေဖော်ဝါရီ ၂၇၊ ၂၀၀၈)
နိုင်ငံတော် အေးချမ်းသာယာရေးနှင့် ဖွင့်ဖြိုးရေးကောင်စီ အတွင်းရေးမှူး (၁) ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး သီဟသူရ တင်အောင်မြင့်ဦး သည် ယနေ့မွန်းလွဲ (၁)နာရီတွင် နေပြည်တော်ရှိ နိုင်ငံတော် အေးချမ်း သာယာရေးနှင့် ဖွင့်ဖြိုးရေးကောင်စီရုံး အစည်းအဝေးခန်းမ၌ ကျင်းပသည့် ချီဗွေငယ် ရေအားလျှပ်စစ် စီမံကိန်း ကန်ထရိုက် စာချုပ်ချုပ်ဆိုပွဲ အခမ်းအနားသို့ တက်ရောက်ချီးမြှင့်သည်။
အဆိုပါ စာချုပ်ချုပ်ဆိုပွဲ အခမ်းအနားသို့ အမှတ်(၁) လျှပ်စစ် စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာန ၀န်ကြီး ဗိုလ်မှူးကြီးဇော်မင်း၊ အမှတ်(၂) လျှပ်စစ် စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာန ၀န်ကြီး ဗိုလ်ချုပ် ခင်မောင်မြင့်၊ အမှတ်(၁) လျှပ်စစ် စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယ ၀န်ကြီး ဦးမျိုးမြင့်၊ နိုင်ငံတော် အေးချမ်း သာယာရေးနှင့် ဖွင့်ဖြိုးရေးကောင်စီရုံး ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဗိုလ်မှူးကြီးကျော်ကျော်ဝင်းနှင့် ဌာနဆိုင်ရာ အကြီးအကဲများ တက်ရောက်ကြပြီး တရုတ်ပြည့်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ National Development and Reform Commission (NDRC) မှ Director General Mr. Kong Ling Long ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့ဝင်များနှင့်အတူ ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး မစ္စတာ ကွမ်မု လည်းတက်ရောက်သည်။
ရှေးဦးစွာ အမှတ်(၁) လျှပ်စစ် စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာန ရေအားလျှပ်စစ် အကောင်အထည် ဖော်ရေး ဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဥိးအောင်ကိုးရွှေနှင့် China Power Investment Corporation (CPI) မှ Vice President Mdm, Zhang Xiaolu တို့သည် ချီဗွေငယ် ရေအားလျှပ်စစ် စီမံကိန်း တည်ဆောက်ခြင်းဆိုင်ရာ ကန်ထရိုက် စာချုပ်ကို လက်မှတ်ရေးထိုးကြပြီး စာချုပ်များကို အပြအလှန် လဲလှယ်ကြသည်။
ထို့နောက် အတွင်းရေးမှူး (၁) ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး သီဟသူရ တင်အောင်မြင့်ဦး၊ ၀န်ကြီးများ၊ ဒုတိယ၀န်ကြီးနှင့် ဌာနဆိုင်ရာ အကြီးအကဲများသည် တရုတ်ပြည်သူ့ သမ္မတနိုင်ငံ NDRC မှ Director General Mr. Kong Ling Long ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့နှင့်အတူ မှတ်တမ်းတင် ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီး အခမ်းအနားကို ရုပ်သိမ်းလိုက်သည်။
Comments Off on ချီဗွေငယ် ရေအားလျှပ်စစ် စီမံကိန်း ကန်ထရိုက် စာချုပ် ချုပ်ဆိုပွဲ	| ချီဗွေငယ် (Chibwe Nge)	| Permalink
Yeywa hydro electric power project inspected
(NAY PYI TAW, 18 Feb )
Minister for Electric Power No 1 Col Zaw Min inspected the Yeywa hydro electric power project being implemented on Myitnge river near Ye-Yaman village 31 miles south-east of Mandalay on 16 February morning. At the briefing hall, Construction Group2Director U Myint Zaw reported on progress of the project, future plans, arrival of machinery and arrangements for delivering them to the project.
The minister stressed the need to complete the task in time and fulfilled the requirements. Next, the minister looked into the installation of pen stocks pipes, concrete works and construction of flit bucket and spillway.
After that, the minister inspected the undertakings to install the Bottom Outlet Gate Chamber and construction of power station, concrete works, earth works, production of steel pipes and test-production of brick block.
In meeting with engineers and staff, the minister fulfilled the requirements.
Upon completion, the project will be able to generate 3,550 million KWH
Comments Off on Yeywa hydro electric power project inspected	| ရဲရွာ (့Yeywa)	| Permalink
၀န်ကြီး ဗိုလ်မှူးကြီး ဇော်မင်း ရဲရွာ ရေအားလျှပ်စစ် စီမံကိန်း ကြည့်ရှုစစ်ဆေး
အမှတ်(၁) လျှပ်စစ် စွမ်းအား ဝန်ကြီးဌာန ဝန်ကြီး ဗိုလ်မှူးကြီး ဇော်မင်းသည် ဖေဖော်ဝါရီ ၁၆ ရက် နံနက်ပိုင်းတွင် မန္တလေးမြို့ အရှေ့ တောင်ဘက် ၃၁ မိုင်အကွာ ရဲ-ယမန်း ရွာအနီး မြစ်ငယ်မြစ်ပေါ်၌ တည်ဆောက် အကောင် အထည် ဖော်လျက် ရှိသော ရဲရွာ ရေအား လျှပ်စစ် စီမံကိန်းသို့ ရောက်ရှိရာ ဝန်ကြီးအား ရှင်းလင်းဆောင်၌ တည်ဆောက်ရေး (၂) ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးမြင့်ဇော်က စီမံကိန်း လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှု၊ ဆက်လက် ဆောင်ရွက်နေသည့် လုပ်ငန်းများ၊ စက်ပစ္စည်းများ ရောက်ရှိမှုနှင့် စီမံကိန်းသို့ သယ်ယူရန် စီစဉ် ဆောင်ရွက်ထားမှုတို့ကို ရှင်းလင်းတင်ပြရာ ဝန်ကြီးက သတ်မှတ်ကာလအတွင်း ပြီးစီးရမည့် လုပ်ငန်းများကို အပိုင်းလိုက် ပြီးစီးအောင် ဆောင်ရွက်ရန်မှာကြားပြီး စီမံကိန်း လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးသည်။
ထို့နောက် ဝန်ကြီးသည် Penstock Pipe များ တတ်ဆင်ခြင်း လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေမှု၊ ကွန်ကရစ် လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်နေမှု၊ ကွန်ကရစ် လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်နေမှု၊ RCC သွန်းလောင်းနေမှု၊ RCC Dam ပေါ်၌ CVC ကွန်ကရစ်လောင်း၍ Flit Bucket နှင့် Spillway တည်ဆောက်နေမှုကို လှည့်လည်ကြည့်ရှုစစ်ဆေးသည်။
<ဆက်လက်၍ ဝန်ကြီးသည် တမံ၏ ဥမင်အတွင်းသို့ ဝင်ရောက်ပြီး Bottom Outlet Gate Chamber များ တတ်ဆင်ရန် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု၊ EL 85 ရှုရပ်မှနေ၍ ဓာတ်အားပေးစက်ရုံ တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်း၊ ဓာတ်အားပေး စက်ရုံ၏ Unit 1, Unit 2, Unit3တို့၌ Machine Bay ကွန်ကရစ်သွန်းလောင်းခြင်း လုပ်ငန်း၊ ဓာတ်အားပေးစက်ရုံ ရေထုတ်မြောင်း၊ မြေကြီးကျောက်သား တူးဖော်ခြင်း လုပ်ငန်း၊ သံမဏိပိုက်လိုင်းများ ထုတ်လုပ်နေသော အလုပ်ရုံ၊ ဓာတ်အားပေးစက်ရုံ၌ အသုံးပြုမည့် အုတ်ဘလောက်တုံးစက်ရုံ စမ်းသပ် ထုတ်လုပ်နေမှုတို့ကို ကြည့်ရှုစစ်ဆေးသည်။
ထို့နောက် ဝန်ကြီးသည် ရှင်းလင်းဆောင်၌ စီမံကိန်းတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေကြသော အင်ဂျင်နီယာများနှင့် ဝန်ထမ်းများအား တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှာကြားပြီး လိုအပ်သည်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးသည်။
ရဲရွာရေအား လျှပ်စစ် စီမံကိန်း ပြီးစီးပါက စက်တတ်ဆင်အင်အား ၇၉၀ မဂ္ဂါဝပ်မှ နှစ်စဉ် လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ကီလိုဝပ် နာရီသန်းပေါင်း ၃၅၅၀ သန်းခန့် ထုတ်လုပ့်ဖြန့်ဖြူးပေးမည့် စီမံကိန်း ဖြစ်ပါသည်။
Comments Off on ၀န်ကြီး ဗိုလ်မှူးကြီး ဇော်မင်း ရဲရွာ ရေအားလျှပ်စစ် စီမံကိန်း ကြည့်ရှုစစ်ဆေး	| ရဲရွာ (့Yeywa)	| Permalink
Minister for Electric Power No 1 Col Zaw Min inspected progress of Nancho Hydropower Project
(NAY PYI TAW,3Feb, 2008 )
Minister for Electric Power No 1 Col Zaw Min yesterday inspected progress of Nancho Hydropower Project to be installed with 40 megawatts generator on Nancho Creek, 16 miles from Nay Pyi Taw Pyinmana.
The minister viewed drilling of the water tunnel No 1 and the tunnel Portal of the water tunnel No 2, preparations for construction of the power station. Nancho Hydropower Project has completed by 17.03 per cent.
At Upper Paunglaung Hydropower Project to be installed with 140 megawatts, the minister viewed construction of 968 feet long diversion tunnel and instructed officials to take acre of the tunnel construction task.The minister also inspected sites chosen for construction of RCC embankment, RCC and CVC batching plant, the Crushing Plant No 1 and No2and Aggregate Stock Piles, and preparations for construction of the quarry.
Comments Off on Minister for Electric Power No 1 Col Zaw Min inspected progress of Nancho Hydropower Project	| နန်ချို (Nancho)	| Permalink
နန်ချိုနှင့် အထက်ပေါင်းလောင်း စီမံကိန်းများ ဝန်ကြီး ဗိုလ်မှူးကြီး ဇော်မင်း ကြည့်ရှုစစ်ဆေး
(နေပြည်တော် ဖေဖော်ဝါရီ ၃၊ ၂၀၀၈)
အမှတ်(၁) လျှပ်စစ်စွမ်းအား ဝန်ကြီးဌာန ဝန်ကြီး ဗိုလ်မှူးကြီး ဇော်မင်းသည် တာဝန်ရှိသူများ လိုက်ပါ၍ ဖေဖော်ဝါရီ (၂) ရက်နေ့ နံနက်ပိုင်းတွင် ရေအားလျှပ်စစ် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ဦးစီးဌာန အမှတ်(၁) တည်ဆောက်ရေးက နေပြည်တော် ပျဉ်းမနား၏ အရှေ့ဘက် (၁၆)မိုင်အကွာ နန်ချိုချောင်းပေါ်၌ တည်ဆောက် အကောင်အထည် ဖော်လျက်ရှိသော စက်တတ်ဆင်အင်အား ၄၀ မဂ္ဂါဝပ် ရှိမည့် နန်ချိုရေအားလျှပ်စစ် စီမံကိန်း လုပ်ငန်းများကို ကြည့်ရှုစစ်ဆေးသည်။
နန်ချိုရေအားလျှပ်စစ် စီမံကိန်းသည် ယခုအခါ ၁၇.၀၃ ရာခိုင်နှုံး ပြီးစီးနေပြီဖြစ်သည်။
ထိုမှတစ်ဆင့် ဝန်ကြီးသည် နေပြည်တော်ပျဉ်းမနား အရှေ့ဘက် ၂၆ မိုင်အကွာ ပေါင်းလောင်း မြစ်ပေါ်၌ တည်ဆောက်လျက်ရှိသော စက်တတ်ဆင်အင်အား မဂ္ဂါဝပ် ၁၄၀ ရှိမည့် အထက်ပေါင်းလောင်း ရေအားလျှပ်စစ် စီမံကိန်းကို ကြည့်ရှုစစ်ဆေးခဲ့သည်။
Comments Off on နန်ချိုနှင့် အထက်ပေါင်းလောင်း စီမံကိန်းများ ဝန်ကြီး ဗိုလ်မှူးကြီး ဇော်မင်း ကြည့်ရှုစစ်ဆေး	| နန်ချို (Nancho)	| Permalink
Secretary-1 inspects Kengtawng Hydropower Project in Monghsat, Kehsi Townships
(Nay Pyi Taw, 31 Jan, 2008)
Secretary-1 of the State Peace and Development Council Lt-Gen Thiha Thura Tin Aung Myint Oo, accompanied by SPDC member Lt-Gen Kyaw Win of the Ministry of Defence, Lt-Gen Myint Hlaing of the Ministry of Defence, Chairman of Shan State (East) PDC Commander of Triangle Region Command Maj-Gen Min Aung Hlaing, Minister for Mines Brig-Gen Ohn Myint, Minister for Electric Power No 1 Col Zaw Min, Minister for Electric Power No2Maj-Gen Khin Maung Myint, Deputy Minister for Health Dr Mya Oo, Deputy Minister for Home Affairs Brig-Gen Phone Swe and officials of the SPDC Office and departmental heads, arrived at the site of Kengtawng Hydropower Project on 30 January morning, they proceeded to the site of Kengtawng Hydropower Project being implemented by Hydropower Projects Implementation Department on Namtein Creek, 30 miles northeast of Mongnai of Langkho District. They were welcomed by Chairman of Shan State PDC Commander of Eastern Command Maj-Gen Thaung Aye and officials.
At the briefing hall, Minister Col Zaw Min reported that Kengtawng Hydropower Project is being implemented for generating more electricity and supplying more power to Shan State in accord with the guidance of the Head of State. The project will generate 54 megawatts or 472 million kwh yearly. Construction of the diversion dam-1, the diversion dam-2, the power intake building, the inlet channel, the channels, the water tanks and many other tasks of the project have been completed. In addition, the laying of pre-stressed pipelines is completed 65 per cent and the construction of the power station 80 per cent. The plan is under way to complete implementing of the whole project in mid-2008.
The minister continued to report that the Upper Kengtawng Hydropower Project is also being implemented with the aims of supplying hydropower to Loilem and Langkho districts and to support the surplus to the national grid. The project will produce 52.5 megawatts.
Minister Maj-Gen Khin Maung Myint also submitted the reports that the preparations are being made for supply of 54 megawatts of hydropower from Kengtawng Hydropower Plant to townships of Loilem and Langkho districts in Shan State (South) through Namsang Power Station and the electricity surplus to the remaining regions through Namsang-Pinpet-Kalaw 132 KV power line. Tasks are being carried out for installation of Kengtawng-Namsang, Namsang-Pinpet, Namsang-Loilem and Namsang-Mongnai power lines, construction of power stations in Namsang, Loilem and Mongnai, and installation of power lines such as Mongnai-Maukmai and Langkho-Mongpan and the power line from Kengtawng Hydropower Plant to Kangtawng. In addition, power stations are being built in Mongnai, Maukmai, Langkho, Mongpan and Kengtawng. Arrangements are being made to supply power to the townships through the national grid as one generator of Kengtawng Power Plant is in operation to generate power.
After hearing the reports, the Secretary-1 stressed the need to complete the Kengtawng Hydropower Project and the Upper Kengtawng Hydropower Project on schedule and set the plans to supply electricity to the regions and systematically use power in accord with the guidance of the Head of State.
The Secretary-1 presentedafruit basket to Project manager Mr Wu Jing De of the project.
The Secretary-1 and party looked into Nantein creek (Kengtawng waterfall) and power station, and scale model of Kengtawng hydel power station project and gave necessary instructions. They inspected the progress of construction of the project.
Comments Off on Secretary-1 inspects Kengtawng Hydropower Project in Monghsat, Kehsi Townships	| ကျိုင်းတောင်း (Kengtawng), အထက်ကျိုင်းတောင်း (Upper Kengtawng)	| Permalink
You are currently browsing the Moep1's Blog blog archives for February, 2008.